Iwe Unofanirwa riini Kugadzirisazve Yako Logo? | Martech Zone
China, June 25, 2015 China, June 25, 2015 Douglas Karr
Chikwata chinobva Bvisa Dhizaini wakaburitsa iyi yakanaka infographic ine dzimwe pfungwa dzakatenderedza izvo zvaunofanira kuziva nezve logo kugadzirisazve, zvikonzero nei uchifanira kugadzirisazve, zvimwe zvaunoita uye zvisingaiti zvekugadzirisa patsva, zvimwe logo zvekugadzirisa zvakare zvikanganiso, uye mimwe mhinduro kubva kune nyanzvi dzeindasitiri.
Tatu Zvikonzero zvina zvekugadzirisazve yako logo
Kambani Kubatana - kubatanidzwa, kuwanikwa, kana kambani mabhaisikopu anowanzo kuda logo nyowani kuratidza kambani nyowani.
Iyo Kambani Inokura Beyond Yayo Yekutanga Kuzivikanwa - yekambani iri kuwedzera mupiro wayo, senge kuunza zvigadzirwa zvitsva, masevhisi, nezvimwe kugadzirisazve logo yavo inogona kuve nzira inoshanda yekuratidzira shanduko yekambani.
Kambani Kuvandudza - makambani anga aripo kwenguva yakareba uye angangoda logo.
Ndinoda kuwedzera chimwe chikonzero! Nharembozha yekutarisa uye yakakwira tsananguro yedhijitari skrini akachinja zvachose maratidziro anoita logo yako. Kwakave nemazuva ekuona kuti logo yako inotaridzika zvakanaka mutema nemuchena pane fax muchina.
Mazuva ano, kuve ne favicon inodikanwa asi inogona kungotariswa chete pixels gumi neshanu nema16pixels… zvinoita kunge zvisingaite kutaridzika zvakanaka. Uye inogona kuenda yose kusvika kumufananidzo pane retina inoratidzira pa 16 pixels pa inch. Izvo zvinoda rimwe rakanaka dhizaini basa kuti zviitwe nemazvo. Kutora mukana wepamusoro dudziro skrini zvikonzero zvine musoro, mumaonero angu, kuti uwane logo nyowani!
Kana usati wagadzirisa logo yako mumakore mashoma apfuura, logo yako ingaite kunge yakachembera kune chero munhu arikutsvaga online (iri rinenge munhu wese!).